Knowledge Archives - Celefans
September 14, 2021 Cele Fans Comments Off on အင်တာနက်ဖြတ်ခံရတဲ့ နေရာဒေသတွေအတွက်
အင်တာနက် ဖြတ်ခံရတဲ့ဒေသတွေ တစ်နယ်လုံး ဖုန်းကတ်တစ်မျိုးတည်းသုံးပါ နောက် တစ်နယ်လုံးတူညီတဲ့ ဖုန်းကတ် တစ်မျိုး အရံထားပါ ဥပမာ အော်ရီဒူးတစ်မျိုးပဲ ဖုန်းခေါ် မက်ဆေ့ချ်ပို့လုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ တယ်လီနောကို အော်ရီဒူးပျက်သွားရင်သုံးဖို့အရံထားပါ ​အွန်လိုင်း ရတဲ့ဒေသတွေကနေ အဲဒီဒေသတွေဆီကို အွန်လိုင်း ပေါ်ကနေ အရေးပါပြီး သိသင့်သိထိုက်တဲ့ သတင်းအကျဥ်းချုပ်တွေကို မက်ဆေ့ချ် နဲ့ပို့ပေးပါ အဲဒါကိုမှ အချင်းချင်း ပြန်ဖြန့်ကြပါ ဒီနေရာမှာ သတင်းအမှားအမှန် ခွဲခြားတတ်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ် ယုံကြည်ရတဲ့လူ ခိုင်လုံရတဲ့လူတွေဆီကရတဲ့သတင်းကိုပဲ […]
နိုင်ငံတကာ အားကိုးမရဟု NUG ဘာကြောင့်ပြောသလဲ
September 14, 2021 Cele Fans Comments Off on နိုင်ငံတကာ အားကိုးမရဟု NUG ဘာကြောင့်ပြောသလဲ
ခ်ီးနားကို မယုံလို႔ ဒီသေဘာပဲ ျဖစ္မယ္ထင္သည္ဟု ! (၁) ဘိုင္ဒန္ ခ်ီးနား လက္ဝါး႐ိုက္ညႇိျခင္းဟာ ျမန္မာမွာ တည္ထားတဲ့ proxy war ကို သူတိူ႔ႏွစ္ဦး စစ္ေရး ေရွာင္လႊဲၿပီးသား ျဖစ္ေစတယ္ (၂) ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းကို ဆက္ထားၿပီး ႏို၀င္ဘာထိ အခ်ိန္ ေ႐ြ႕ျခင္းဟာ သာမန္ၾကည့္ရင္ NUG ဘက္ ပါသေယာင္နဲ႔ အင္အားေလ်ာ့ေနတဲ့ စကစအတြက္ အခ်ိန္ဆြဲေပးျခင္းတမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ ေလ်ာ့သြားေအာင္ စကစ လုပ္ကြက္ရေအာင္ […]
NUG တရား၀င် အစိုးရဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ??
September 13, 2021 Cele Fans Comments Off on NUG တရား၀င် အစိုးရဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ??
NUG တရား၀င် အစိုးရဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်မလဲ ?? – တျုတ် ၀င်ပါရှုပ်မရတော့ဘူး – ငပူတင်း အနားကပ်မျတော့ဘူး – စစ်တပ်ဟာ အကြမ်းဖက် ဘ၀ ..NUG နဲ့ ပြည်သူ ဘယ်လို ဗျင်းချင်သလဲ စိတ်ကြိုက်ဗျင်းစမ်း ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ဘုရင်ဖြစ်ပြီ စကစ လက်နက်စုံထုတ်သူံးလာရင် ဟဲဟဲ မဟာ မိတ်တွေ ၀င်ကူ ဖြုတ်ပေးလို့ရပြီ ( လက်နက် နည်းပညာ ကူညီလို့ရပြီ ) […]
September 12, 2021 Cele Fans Comments Off on အသက်ရှူနိုင်ရန်ပင် မနည်းအားထုတ်လာနေရပြီ ဖြစ်သည့် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့
မင်းအောင်လှိုင်၏ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် ခုနှစ်လ သာ ကျော်လာခဲ့သော်လည်း ထင်သလို ဖြစ်မလာသည့် အပြင် အသက်ရှူ နိုင်ရန်ပင် မနည်းအားထုတ်လာနေရပြီ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ပင်မ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ဖြစ်သော မိုင်တဲ တာဝါတိုင်များက နေ့စဉ်လို ဖျက်ဆီးခံနေရသည်နှင့် အမျှ ကိုယ့်အရိပ်ကိုပင် ကိုယ်မယုံနိုင်အောင် ယုံထင် ကြောင်ထင် ဖြစ်လာသည်။ ယင်းနှင့် အတူ ၎င်း၏ အလိုတော်ရိများအား မည်သို့ မည်ပုံ နှိမ်နှင်းရမည် […]
ပြည်သူ့မျိုးဆက် အသစ်အတွက် အာရှကျားကိုစီးပြီး ဒေါင်းစစ်သည်တို့ လာချေပြီ
September 12, 2021 Cele Fans Comments Off on ပြည်သူ့မျိုးဆက် အသစ်အတွက် အာရှကျားကိုစီးပြီး ဒေါင်းစစ်သည်တို့ လာချေပြီ
ဒီအချိန်က သုံးသပ်‌နေရမှာ မဟုတ်ဘူး အဖြစ်မှန်ကို ‌ရှာဖွေ ရေးအသိပေးရမှာ ဒီတော့ ပထမဦးဆုံးပြောချင်တာက အစ္စရေးတို့ အာမေးနီးယား အဇာဘိုင်ဂျန်တို့ စစ်ဖြစ်တာ ဘာ‌စောင်သံမှ မထွက် မကြားရဘူး ကိုယ့်နိုင်ငံရေမြေ ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး ဘယ်သကောင့်သားမှလည်း မတိုင်ပင် မဆွေးနွေး( နွေးလည်းမရ ချတာပဲ ၊ အဇာဘိုင် အာမေးနီး ဒီနေ့ဆွေးနွေး မနက်ဖန် ထချတာ )အချိန်မယူ ချက်ခြင်း တိုက်ကြတာပဲ နိုင်ငံကာကွယ်မှုအတွက်ဆိုပြီး အကြောင်းပြချက် ခံယူမှုနဲ့ ဒီမှာတော့ […]
နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက် ထောင်ပြလိုက်တဲ့ NUG ..
September 10, 2021 Cele Fans Comments Off on နဂါးမှန်းသိအောင် အမောက် ထောင်ပြလိုက်တဲ့ NUG ..
NUG ကခုခံကာကွယ်စစ် တပြည်လုံး ဆင်နွဲရန် ကြေ ငြာလိုက်ပြီးနောက် အားလုံး လှုပ်လှုပ် ခါခါ ဖြစ်လာကြပါတယ်.. အားလုံးဆိုတဲ့အထဲ စကစတို့ တသိုက်တင်မကဘဲ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးက သက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့ အစည်းတို့ကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်… ကြေငြာချိန်ဟာလည်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမတိုင်ခင် Credential Committee ကြားနားမှု့မစခင် တပတ်အလိုမှာ ဖြစ်ပါတယ်..သူတို့ဆုံးဖြတ်ရင် စဉ်းစားမယ့် အခြေခံ အချက်တွေဖြစ်တဲ့ အများဆန္ဒနဲ့ရွေးချယ်ခံရခြင်း ပြည်သူလူထုကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း စသဖြင့် […]
တခုလပ္မေလးေတြ႕ . မုဆိုးမေလးေတြ ေတာင္အလြတ္မေပးဘူး အဲ့ ဒီဘဲရီး ပတ္စားသြားတာ
September 10, 2021 Cele Fans Comments Off on တခုလပ္မေလးေတြ႕ . မုဆိုးမေလးေတြ ေတာင္အလြတ္မေပးဘူး အဲ့ ဒီဘဲရီး ပတ္စားသြားတာ
သူများတွေ ဘယ်လိုမြင်လဲတော့မသိဘူး.. ကိုယ်ကတော့ ဦးထီးပဲ ပြေးမြင်တာ..(တကယ်တော့ သူ့ နောက်ကွယ်က လက်မဲကြီးကဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်) သူဆိုသမျှ သီချင်းတွေ သေချာနားထောင်ကြည့်..360 လှည့်ပတ် ပစ် တာ.. ထိချင်ရာထိပဲ.. စော်လေးဒေတစ်ယောက်မှမလွတ်ဘူး.. အရင်ဆုံး ပထဝီအနေအထားနဲ့ကြည့်မယ်.. ဟိုးအထက် ကချင်ပြည်က စ ကိုင်တာ.. “ဂျိန်းဖောသူ.. ဂျိန်းဖောသူ” ဆိုပြီး အေးအေးလူလူ သီချင်းလေးတညည်းညည်းနဲ့ကို စ တာ.. ပြီးတော့ “မောင့်လားဟူမလေး” ဆိုပြီး အဲ့အနီးအနားက တိုင်းရင်းသူလေးနဲ့က […]
September 10, 2021 Cele Fans Comments Off on ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်တပ်မတော်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောခွင့်ရချင်ပေမယ့်
ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်တပ်မတော်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူ၀င့်ကြွားစွာပြောခွင့်ရချင်တဲ့သူချည်းပါပဲ။ အခုက စစ်တပ်ဟာ သောက်ချိုးမပြေလွန်းလို့။ မအလနဲ့ လက်ပါးစေတွေကြောင့် သာ အားလုံးဟာ တော်လှန်ပုန်ကန် သူတွေ ဖြစ်လာကြတာ။ လူငယ်လေးတွေကိုသာ ပစ်မသတ် ခဲ့ရင် ဒီလိုအခြေအနေတွေဆိုတာ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ညလာဖမ်း၊ မနက်အလောင်းလာထုတ်ခိုင်း ဒီလုပ်ရပ်တွေသာ မကျူးလွန်ခဲ့ရင် တိုင်းပြည်ဟာ ပျက်စရာမရှိဘူး။ ပြည်သူအများအပေါ် မေတ္တာသာ ထားဖူးခဲ့ရင် အားလုံးခက်ခဲတဲ့လမ်းကို မြန်မာပြည်ကျရောက်စရာမရှိဘူး။ အခုတောတွေထဲမှာ စစ်ပညာသင် ပြီးသူ ___သိန်းနီးပါးရှိတယ်။ မတရားအကျဉ်းချ ခံထားရသူ (၇,၀၀၀)ကျော်ရှိတယ်။ CDM […]
September 10, 2021 Cele Fans Comments Off on ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ်
ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ စစ်ဦးစီးချုပ် အဖူးနဲ့ ၂၀၂၀ နှစ်ဆန်းပိုင်းလောက်တုန်းက အမှတ်မထင်ဆုံဖြစ်ခဲ့ပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် တိုက်ပွဲတွေအကြောင်း နားထောင်ခဲ့ရဖူးတယ်။အဲဒီမှတ်သားစရာတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းတော့ နောက်မှ တခမ်းတနား ပြန်ပြောပါ့မယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော် သူ့အကြောင်းသိသလောက်လေး ပြောပါရစေ။သူဟာ စစ်ပရိယာယ် လွန်စွာကြွယ်၀ပြီးတစ်တောင့်ထိုး ဂျော်နီရယ်လို့ ရန်သူတွေဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင် ကြောက်ခဲ့ရတဲ့သူ။ လက်ဖြောင့်လွန်းတဲ့အပြင် လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ် လွန်စွာပိုင်နိုင်လှတဲ့သူ။အရင်တုန်းက သူ့စစ်ကြောင်း ချီတက်လာပြီဆိုရင် အဝေးကနေ ဖုန်လုံးကြီးပဲမြင်ရတယ်တဲ့။ စစ်သည်အင်အား ၆၀၀ကနေ ၈၀၀ လောက်အထိ ချီတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကြီးကို မြင်းစီးပြီး […]
ဘယ်သူ့ဆီကမှ အလှူမခံလိုတဲ့ နှလုံးလှလူမိုက်ကြီး
September 10, 2021 Cele Fans Comments Off on ဘယ်သူ့ဆီကမှ အလှူမခံလိုတဲ့ နှလုံးလှလူမိုက်ကြီး
သူ ကျန်းမာရေးလေး ပြန်ကောင်းလာတော့ ညဘက်ဆို သီချင်းလေးတွေ ဆိုပြတယ်။ အတူရှိနေတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကို ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်ဖြစ်ရပ်မှန် ဟာသလေးတွေ ပြန်ပြန်ပြောပြတယ်။ ခန့်ညားလှတဲ့ ဇာတ်စင်မြင့်ကြီးတစ်ခုပေါ်က နှင်းဆီတစ်ပွင့်ရဲ့ဟန်ပန်အမူအရာ အပြည့်နဲ့ပေါ့။ အားလုံးကို ပွဲကျစေခဲ့တာကတော့ဦးသုမောင်ရှိခဲ့စဉ်က အလွဲတချို့နဲ့ဦးကျော်သူကြီးရဲ့လူငယ်သဘာ၀ပုံရိပ်တချို့ပါပဲ။ခဏတာ အပျော်တွေကူးစက်ပြီးအားလုံးပြုံးပျော်နေကြပြီဆိုရင်ဖြင့်ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုံးရွှင်နေခဲ့တဲ့သူ့ပုံရိပ်‌တွေကို ပြန်မြင်ယောင်တိုင်းကျွန်တော် သူ့အကြောင်း ပြန်ပြန်တွေးမိတယ်။ သွားသေးသေးလေးတွေအပြည့်နဲ့နှလုံးသားလှသူကြီး၊ စိတ်ညစ်နေသူတချို့ကို သွားသေးသေးလေးတွေအများကြီးပေါ်အောင် ပြုံးဖြီးဖြီးလုပ်ပြပြီး စိတ်သက်သာစေသူကြီး။ သူဟာ စိတ်အေးလက်အေး ရှိလှတဲ့သူ။ပုံမှန် ဘုရား၀တ်ပြုပြီး တရားထိုင်လေ့ရှိတဲ့သူ။ ဖြစ်နိုင်ရင် […]